ဆိုင်လှလှလေးမှာ စားချင်စရာ ဦးရွှေရိုးချက်တဲ့ လက်ရာ၊ ဦးရွှေရိုး ချက်တဲ့ မနက်စာ။
3 Mar 2018 . 8:21 PM
မြန်မာလူမျိုးတွေဆိုတာက ဘယ်ဘိုစာ၊ ဘာကောင်းကောင်း မနက်ခင်းအိပ်ရာနိုးချိန်တော့ မြန်မာ့မနက်စာလေးစားလိုက်ရမှ အာသာပြေတဲ့ အမျိုးတွေမဟုတ်လား?
ဘယ်အစားအစာတွေ ဘယ်လိုပေါ်လာပေါ်လာ ထမင်းကြော်ပူပူလေးနဲ့ အကျရည်ကောင်းကောင်းနှပ်ထားတဲ့ လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်လောက် ကိုယ့်မနက်ခင်းတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒီလို မနက်စာ ကောင်းကောင်းကို အစုံရနိုင်မယ်၊ ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ညီညွတ်မယ်၊ သန့်ပြန့်နေတဲ့အပြင်အဆင်နဲ့ အဆင့်အတန်းမီမီစားဖို့ မြန်မာ့လက်ရာနဲ့ မနက်စာအစုံရနိုင်တဲ့ ချစ်စရာဆိုင်လေးတစ်ဆိုင် ရန်ကုန်မှာ တိုးလာပါပြီတဲ့။
ဆိုင်လေးက ရွှေရိုး Tea House တဲ့နော်။ Facebook ပေါ်မှာ ဦးရွှေရိုးလက်ရာလေးတွေဆိုပြီး နေရာယူလာတာမကြာသေးပါဘူး။
ဆိုင်အပြင်ဆင်က ၂ထပ်ရှိပြီး တစ်ဆိုင်လုံးကို Black and White Theme လေးနဲ့ လှလှလေး ဒီဇိုင်းဆွဲထားပါတယ်။ အောက်ထပ် ဝင်ဝင်ခြင်း ဘယ်ဘက် နံရံမှာတော့ ဒီဇိုင်းဆရာငယ်ငယ်လေးရဲ့ ပြောင်မြောက်အထာကျလွန်းတဲ့ ဦးရွှေရိုး ၃ ကိုယ်ခွဲကိုတွေ့နိုင်ပြီး တစ်ဖက်ခြမ်းနံရံမှာတော့ မြန်မာ့ဓလေ့၊မြန်မာ့စာဟန်လေးတွေကို ဘောင်လေးတွေနဲ့ ချိတ်ထားတာ ကြွေချင်စရာပါ။ အပေါ်ထပ်မှာတော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်ရတဲ့ ပုံစံလေး ခင်းကျင်းထားပါတယ်။
ဦးဦးဖျားဖျား သတိထားမိတာ သန့်ရှင်းမှုပါ။ အစားအသောက်ရော၊ အပြင်အဆင်ရော သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီတယ်လို့ ပထမဦးဆုံး ခံစားရစေပါတယ်။
ထမင်းကို ပုစွန်ဆီဆမ်းပြီး အသီး၊အရွက်၊ ကြက်ဥလေးတွေနဲ့ကြော်ထားတဲ့ အရသာက ငယ်ငယ်က အိမ်မှာ အမေနယ်ကျွေးခဲ့တဲ့ ထမင်းလေးကို ပြန်အမှတ်ရစေမှာပါ။ ပုစွန်ဆီနံ့လေးသင်းပြီး ဆိမ့်မွှေးနေတဲ့ ဒီထမင်းကတော့ ပမာဏအများကြီး တစ်ပွဲဆို တစ်ပွဲပြောင်သွားမယ့်အရသာပါ။ ၃၀၀၀ ကျပ်ပါ။
ခေါက်ဆွဲသားအိအိလေးကို ပဲငံပြာရည်ကောင်းကောင်း အသားအိအိလေးနဲ့ ကိုရီးယားစတိုင်မဟုတ်တဲ့ သူ့နည်းလျာအသစ်နဲ့ ချက်ထားတဲ့ပုံစံပါ။ ချိုမြမြမွှေးမွှေးလေးနဲ့ စားကောင်းပါတယ်။ ၂၅၀၀ ကျပ်ပါ။
သူ့တစ်ဆိုင်တည်းမှာပဲ ရနိုင်တဲ့ အစားအစာပါ။ ဆန်ခေါက်ဆွဲ ကို အပြားလိုက် ဖြန့်ခင်း ကြက်ဥအနှစ်အလွှာလိုက်ဆမ်းပြီး၊ အထဲက အသားတုံးလေးတွေနဲ့ ပေါင်းထားတာပါ။ အပေါ်ကမှ ပဲအချိုရည်ပြန်ဆမ်းထားတာပါ။ သူလည်း ၂၅၀၀ ကျပ်ပါ။ လူကြီးတွေအတွက် ပိုသင့်တော်ပါတယ်။
ဆိတ်စွပ်အနံ့ရော အရသာရော အမှတ်ပြည့်ပေးပါတယ်။ ပဲကိုကြေနေအောင် ချက်ထားပြီး မဆလာနိုင်နင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ပလာတာလေး နည်းနည်းဆီအိနေတာလေးပါပဲ။ စားကောင်းလွန်းလို့ ဆိတ်ရိုးလေး နည်းနည်းပိုပါစေချင်မိတယ်။ သူက ၂၇၀၀ ပါ။
(၅) ဦးရွှေရိုး ဒေါ်မိုးသုပ်
နာမည်လေးဆန်းလို့ မှာကြည့်တာ သူက ခေါက်ဆွဲနဲ့ပဲကြာဆံကို မြန်မာ့လက်သုပ်ပုံစံလေးသုပ်ထားတာပါ။ မွှေးမွှေးဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့ စားကောင်းတယ်။ ၁၈၀၀ ကျပ်ပါ။
နောက် ကြိုက်လွန်းတာကတော့ လက်ဖက်ရည်ပါ။ သူ့ထူးခြားချက်က မှာမှ အကျရည်ကို သေသေချာချာနှပ်ပြီး Drip Coffee ဆန်ဆန် စနစ်တကျအရသာဝင်အောင်ဖျော်ပေးတာပါ။ လူကြီးကြိုက်၊ လူငယ်ကြိုက် အရသာပါ။ လက်ဖက်ခြောက်ရဲ့ လတ်ဆတ်မှုပါခံစားရပါတယ်။ တစ်ခွက်မှ ၈၀၀ ကျပ်ပါတဲ့။
စားချင်တာစားပြီး ကယ်လိုရီကျ၊ အအီပြေချင်သူတွေအတွက်တော့ အသီးစစ်စစ်တွေနဲ့ချည်း ဘာသကြား၊ ဘာတခြားအရောအနှောမှမပါတဲ့ Detox Juice စစ်စစ်တွေရပါတယ်။ ထင်ထားတဲ့အရသာက ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်အဖတ်တွေနဲ့ထင်ခဲ့တာ သောက်ကြည့်မှချိုချဉ်ရှိန်းမွှေး သောက်ကောင်းချက်။
သူ့အပြင်အဆင်နဲ့ သူ့ဈေးနှုန်းဆို ရန်ကုန်က နာမည်ကြီး ဈေးကြီးကြီးဆိုင်တွေလက်ရာအတိုင်း၊ သန့်ရှင်းမှုအတိုင်း ထပ်တူကျအောင် ဖန်တီးထားပြီး ဈေးနှုန်းကိုတော့ လူတိုင်းစားနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားတာ သဘောကျစရာပါ။ ကျန်းမာသန့်ရှင်းတဲ့ မြန်မာ့လက်ရာစစ်စစ်ကို စားရတာမို့ ကျေနပ်စရာပါ။
အကြံပေးရရင်တော့ နန်းကြီးသုပ်တို့လိုမျိုး တစ်ခုတစ်လေကျ အရသာပိုင်း သေချာပြန်စစ်ပြီး အစားအစာအားလုံးကို တစ်ခုစီတိုင်း အရသာကောင်းစေချင်ပါတယ်။ လူစည်ကားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မို့ ခြင်၊ ယင် အားလုံး ဂရုစိုက်စေချင်ပါတယ်။ ကျန်တာကတော့ နောက်တခေါက် ထပ်လာစားချင်မိတဲ့ ဆိုင်လေးပါ။
လ်ပ်စာကတော့ အမှတ် ၁၈၁၊ အနော်ရထာလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်ပါ။ စံပြမှတ်တိုင်အနားမှာနော်။
မနက် ၆ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီထိ ဖွင့်ပါတယ်နော်။
ဆိုငျလှလှလေးမှာ စားခငျြစရာ ဦးရှရေိုးခကျြတဲ့ လကျရာ၊ ဦးရှရေိုး ခကျြတဲ့ မနကျစာ။
မွနျမာလူမြိုးတှဆေိုတာက ဘယျဘိုစာ၊ ဘာကောငျးကောငျး မနကျခငျးအိပျရာနိုးခြိနျတော့ မွနျမာ့မနကျစာလေးစားလိုကျရမှ အာသာပွတေဲ့ အမြိုးတှမေဟုတျလား?
ဘယျအစားအစာတှေ ဘယျလိုပျေါလာပျေါလာ ထမငျးကွျောပူပူလေးနဲ့ အကရြညျကောငျးကောငျးနှပျထားတဲ့ လကျဖကျရညျတဈခှကျလောကျ ကိုယျ့မနကျခငျးတှကေို ဆှဲဆောငျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။
ဒီလို မနကျစာ ကောငျးကောငျးကို အစုံရနိုငျမယျ၊ ကနျြးမာရေးနဲ့လညျး ညီညှတျမယျ၊ သနျ့ပွနျ့နတေဲ့အပွငျအဆငျနဲ့ အဆငျ့အတနျးမီမီစားဖို့ မွနျမာ့လကျရာနဲ့ မနကျစာအစုံရနိုငျတဲ့ ခဈြစရာဆိုငျလေးတဈဆိုငျ ရနျကုနျမှာ တိုးလာပါပွီတဲ့။
ဆိုငျလေးက ရှရေိုး Tea House တဲ့နျော။ Facebook ပျေါမှာ ဦးရှရေိုးလကျရာလေးတှဆေိုပွီး နရောယူလာတာမကွာသေးပါဘူး။
ဆိုငျအပွငျဆငျက ၂ထပျရှိပွီး တဈဆိုငျလုံးကို Black and White Theme လေးနဲ့ လှလှလေး ဒီဇိုငျးဆှဲထားပါတယျ။ အောကျထပျ ဝငျဝငျခွငျး ဘယျဘကျ နံရံမှာတော့ ဒီဇိုငျးဆရာငယျငယျလေးရဲ့ ပွောငျမွောကျအထာကလြှနျးတဲ့ ဦးရှရေိုး ၃ ကိုယျခှဲကိုတှနေို့ငျပွီး တဈဖကျခွမျးနံရံမှာတော့ မွနျမာ့ဓလေ့၊မွနျမာ့စာဟနျလေးတှကေို ဘောငျလေးတှနေဲ့ ခြိတျထားတာ ကွှခေငျြစရာပါ။ အပျေါထပျမှာတော့ လကျဖကျရညျဆိုငျမှာထိုငျရတဲ့ ပုံစံလေး ခငျးကငျြးထားပါတယျ။
ဦးဦးဖြားဖြား သတိထားမိတာ သနျ့ရှငျးမှုပါ။ အစားအသောကျရော၊ အပွငျအဆငျရော သနျ့သနျ့ရှငျးရှငျး ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီတယျလို့ ပထမဦးဆုံး ခံစားရစပေါတယျ။
ထမငျးကို ပုစှနျဆီဆမျးပွီး အသီး၊အရှကျ၊ ကွကျဥလေးတှနေဲ့ကွျောထားတဲ့ အရသာက ငယျငယျက အိမျမှာ အမနေယျကြှေးခဲ့တဲ့ ထမငျးလေးကို ပွနျအမှတျရစမှောပါ။ ပုစှနျဆီနံ့လေးသငျးပွီး ဆိမျ့မှေးနတေဲ့ ဒီထမငျးကတော့ ပမာဏအမြားကွီး တဈပှဲဆို တဈပှဲပွောငျသှားမယျ့အရသာပါ။ ၃၀၀၀ ကပျြပါ။
ခေါကျဆှဲသားအိအိလေးကို ပဲငံပွာရညျကောငျးကောငျး အသားအိအိလေးနဲ့ ကိုရီးယားစတိုငျမဟုတျတဲ့ သူ့နညျးလြာအသဈနဲ့ ခကျြထားတဲ့ပုံစံပါ။ ခြိုမွမွမှေးမှေးလေးနဲ့ စားကောငျးပါတယျ။ ၂၅၀၀ ကပျြပါ။
သူ့တဈဆိုငျတညျးမှာပဲ ရနိုငျတဲ့ အစားအစာပါ။ ဆနျခေါကျဆှဲ ကို အပွားလိုကျ ဖွနျ့ခငျး ကွကျဥအနှဈအလှာလိုကျဆမျးပွီး၊ အထဲက အသားတုံးလေးတှနေဲ့ ပေါငျးထားတာပါ။ အပျေါကမှ ပဲအခြိုရညျပွနျဆမျးထားတာပါ။ သူလညျး ၂၅၀၀ ကပျြပါ။ လူကွီးတှအေတှကျ ပိုသငျ့တျောပါတယျ။
ဆိတျစှပျအနံ့ရော အရသာရော အမှတျပွညျ့ပေးပါတယျ။ ပဲကိုကွနေအေောငျ ခကျြထားပွီး မဆလာနိုငျနငျးတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ ပလာတာလေး နညျးနညျးဆီအိနတောလေးပါပဲ။ စားကောငျးလှနျးလို့ ဆိတျရိုးလေး နညျးနညျးပိုပါစခေငျြမိတယျ။ သူက ၂၇၀၀ ပါ။
(၅) ဦးရှရေိုး ဒျေါမိုးသုပျ
နာမညျလေးဆနျးလို့ မှာကွညျ့တာ သူက ခေါကျဆှဲနဲ့ပဲကွာဆံကို မွနျမာ့လကျသုပျပုံစံလေးသုပျထားတာပါ။ မှေးမှေးဆိမျ့ဆိမျ့လေးနဲ့ စားကောငျးတယျ။ ၁၈၀၀ ကပျြပါ။
နောကျ ကွိုကျလှနျးတာကတော့ လကျဖကျရညျပါ။ သူ့ထူးခွားခကျြက မှာမှ အကရြညျကို သသေခြောခြာနှပျပွီး Drip Coffee ဆနျဆနျ စနဈတကအြရသာဝငျအောငျဖြျောပေးတာပါ။ လူကွီးကွိုကျ၊ လူငယျကွိုကျ အရသာပါ။ လကျဖကျခွောကျရဲ့ လတျဆတျမှုပါခံစားရပါတယျ။ တဈခှကျမှ ၈၀၀ ကပျြပါတဲ့။
စားခငျြတာစားပွီး ကယျလိုရီကြ၊ အအီပွခေငျြသူတှအေတှကျတော့ အသီးစဈစဈတှနေဲ့ခညျြး ဘာသကွား၊ ဘာတခွားအရောအနှောမှမပါတဲ့ Detox Juice စဈစဈတှရေပါတယျ။ ထငျထားတဲ့အရသာက ပေါ့ရှတျရှတျအဖတျတှနေဲ့ထငျခဲ့တာ သောကျကွညျ့မှခြိုခဉျြရှိနျးမှေး သောကျကောငျးခကျြ။
သူ့အပွငျအဆငျနဲ့ သူ့ဈေးနှုနျးဆို ရနျကုနျက နာမညျကွီး ဈေးကွီးကွီးဆိုငျတှလေကျရာအတိုငျး၊ သနျ့ရှငျးမှုအတိုငျး ထပျတူကအြောငျ ဖနျတီးထားပွီး ဈေးနှုနျးကိုတော့ လူတိုငျးစားနိုငျအောငျ စီစဉျပေးထားတာ သဘောကစြရာပါ။ ကနျြးမာသနျ့ရှငျးတဲ့ မွနျမာ့လကျရာစဈစဈကို စားရတာမို့ ကနြေပျစရာပါ။
အကွံပေးရရငျတော့ နနျးကွီးသုပျတို့လိုမြိုး တဈခုတဈလကြေ အရသာပိုငျး သခြောပွနျစဈပွီး အစားအစာအားလုံးကို တဈခုစီတိုငျး အရသာကောငျးစခေငျြပါတယျ။ လူစညျကားတဲ့ပတျဝနျးကငျြမို့ ခွငျ၊ ယငျ အားလုံး ဂရုစိုကျစခေငျြပါတယျ။ ကနျြတာကတော့ နောကျတခေါကျ ထပျလာစားခငျြမိတဲ့ ဆိုငျလေးပါ။
လျပျစာကတော့ အမှတျ ၁၈၁၊ အနျောရထာလမျး၊ လမျးမတျောမွို့နယျ၊ ရနျကုနျပါ။ စံပွမှတျတိုငျအနားမှာနျော။
မနကျ ၆ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီထိ ဖှငျ့ပါတယျနျော။